प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न– आफू मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा भीम रावलले किन एमसिसी पास गरेको ? – kalikadainik.com
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न– आफू मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा भीम रावलले किन एमसिसी पास गरेको ?
सोमबार, फाल्गुण ३०, २०७८ | १५:०९:११ |
त्रिशूली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) नेपालको हितमा रहेको आफ्नो धारणा दोहो¥याउनुभएको छ । उहाँले आज नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै सो धारणा राख्नुभएको हो ।
सो कार्यक्रममा उहाँले हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त एमसिसी परियोजनाका बारेमा गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरु भ्रममात्र भएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले यस परियोजनाको विरोध गर्ने एमाले नेता भीम रावलले आफँै मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा सो परियोजना पास गरेको तर अहिले आएर विरोध मात्र गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न थियो, “आफैँ मन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेका भीम रावलले त्यसबेला किन आलोचना गर्नुभएन ? त्यतिबेला राजीनामा नदिएर के हेरेर बसेको ?” देउवाले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो, “आफू पार्टीको नेता र मन्त्री हुँदा आफँैले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने अनि अहिले किन विरोध गर्दैछन् ? विरोध गर्ने भए त्यसैबला मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनुपर्दैनथ्यो ?”